Wafdi ka socda Jaamacadda Carabta oo la filayo inuu maanta soo gaaro Muqdisho – Radio Muqdisho
Wafdi ka socda Jaamacadda Carabta ayaa lagu wadaa in maanta ay booqasho ku yimaadaan magaalada Muqdisho.
Wafdiga ka socda Jaamacadda Carabta oo uu hogaaminayo R/wasaare ku xigeenka dalka Kuweiyt ayaa la filayaa in saacadaha soo socda ay ka soo degaan garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magalada Muqdisho.
Qaban qaabada soo dhaweynta wafdigaasi ayaa ka socota Muqdisho, iyadoo mas’uliyiin ka tirsan dowladda ay u diyaargaroobeen soo dhaweeynta wafdigaasi.
Maalintii shalay ayaa waxaa Muqdisho soo gaaray xubno ka tirsan jaamacadda carabta ah oo hor dhac u ahaa wafdiga la filayo inuu maanra soo gaaro Muqdisho.
Dowladda Kuweyt ayaa sanadkan heysa hoggaanka ururka jaamacadda carabta oo dalkeenu ka mid yahay.
Mudane hore uga tirsanaa baarlamanka oo lagu dilay Xamarweyne (DAAWO MUUQAAL)